होम पेज • मोडलि World वर्ल्ड
ब्लग: पृष्ठभूमिबाट मोडलिंग
ब्लग सेक्सन: मोडेलिंग पाठ, ट्यूटोरियलहरू, गाईडहरू, रोचक तथ्यहरू।
रिटेल स्टोर: आधुनिक उत्पादकहरू
हाम्रो ब्रान्डको प्रस्तावको साथ खुद्रा स्टोर: मोडेलरहरूका लागि उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू।
मोडलर्स वर्ल्ड अफरको साथ आधिकारिक स्टोरहरू र थोक बिक्रेताको सूची
यसलाई ब्लग नेविगेट गर्न सजिलो बनाउनको लागि यसमा प्रविष्टिहरू निम्न ब्लकको आधारमा समूहबद्ध गरिएका छन्:
फोहोरको प्रविधिहरूको प्रस्तुतिकरण र मोडेलमा लगाउने ट्रेसहरू। वास्तविकताको भ्रम सिर्जना गर्न खेलौनाको उपस्थितिको चरणदेखि मोडेलसँग कार्य गर्दै।
आधारभूत मोडेल कार्यको बारेमा सबै। Gluing, प्रक्रिया र चित्रकारीको बारेमा, हाम्रो अधिकतम अनुसार: स्क्र्याचबाट मोडेल बनाउने।
पहिलो कटेको बाट अन्तिम ग्यालरीमा मोडेलको साथ कामको सम्बन्ध।
ब्लाग खण्ड मोडेलिंग शीर्षकहरूमा समर्पित: स्तम्भहरू, रिपोर्टहरू, अन्तर्वार्ताहरू। मोडेलिंग घटनाहरूका रिपोर्टहरू। सैन्य को बारे मा एक बिट।
ग्लुइंग हुनु अघि बक्सहरूको प्रस्तुतीकरण, रसायनको परीक्षण र मोडेलिंग सामानहरू। के हामी हाम्रो हात मा प्राप्त, उद्देश्य र बिन्दु गर्न।
समाप्त भएका परियोजनाहरूको अन्तिम ग्यालरीहरू। सबै मोडेलहरू जुन मैले काम गरें र जुन सफलतापूर्वक पूर्ण गरियो यस सेक्सनमा यो ठाउँ छ।
मोदरारस्की वर्ल्डमा नयाँ के छ। वेबसाइटको पृष्ठहरूमा के परिवर्तन हुँदैछ र के हुँदैछ भनेर सबै कुरा, तर समाचार र बजार घोषणाको बारेमा पनि।
यस सेक्सनमा, हामी घर बनाएका साना सामानहरू, ग्याजेटहरू र उपकरणहरू मोडेलरहरू र DIY उत्साहीहरूका लागि उपयोगी प्रस्तुत गर्दछौं।
भर्खरको ब्लग प्रविष्टिहरू
हामी अहिले के लेखिरहेका छौं, केमा हामी काम गरिरहेका छौं:
फोहोर तेल Wash 'ami acc। मास्टर Mirek सर्बा
तेल Wash यी हाम्रा उत्पादनहरू हुन् जुन हामी विशेष गरी गर्व गर्छौं। पोलिश मोडलिङ दृश्यमा Mirosław Serba को हो, व्याख्या गर्न आवश्यक छैन। एक धेरै प्रतिभाशाली मानिस, मोडलिङ दूरदर्शी, र एक विशाल संग मोडेलर [...]
ग्रट अर्डरलीबाट समीक्षा
लेखकलाई धन्यवाद छ र हामी तपाईंलाई मिडियामा उहाँलाई अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं: PAYPAL ME: https://paypal.me/Zigmunth PATRONITE: https://patronite.pl/GrotOrderly SKLEPIK CUPSELL: http: //grotordly.cupsell pl / DISCORD LINK: https://discord.gg/jxzq2rx पृष्ठ FACEBOOK मा: http://www.facebook.com/GrotOrderly BLOG BLOGSPOT: http://www.grotorderly.pl
Agtom च्यानलमा एक नयाँ चलचित्र
आज बेलुका राती, एग्टोम च्यानलमा अर्को भिडियो TPटीपी ट्या tank्की - IBG १::7:1 को निर्माणबाट उडानमा आईबीजी स्थिरबाट खबर आयो। टोमेकले पेन्ट लागू गर्ने प्रविधि प्रस्तुत गर्‍यो wash एयरब्रश। [...] रोज्नु भएकोमा धन्यवाद
ब्लगमा सबै पोष्टहरू हेर्नुहोस्
सब भन्दा लोकप्रिय प्रविष्टि
हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रा ग्राहकहरूले के पढ्ने भनेर जाँच गर्नुहोस्:
मोडेलमा पिग्मेन्टहरू लागू गर्दै
कसरी मोडेलमा अपहोल्स्ट्री बनाउने। कसरी मोडेलमा अपहोल्स्ट्री बनाउने
स्पंज असबाब प्रविधि - सरल र प्रभावी!
HobiZone बाट कार्यशाला आयोजकहरू
यसको लायक छ, यो लायक छैन? - समीक्षा
कसरी मोडेल मा चाखलाग्दो प्रभावहरु लाई छिटो र सजीलै प्राप्त गर्न
के तपाईसँग फेसबुक खाता छ? हाम्रो समूहमा शामिल हुनुहोस् मोडलि and र वेदरिंग फ्यानहरू!
समुदायमा रहनु भनेको आफैलाई प्रस्तुत गर्ने, प्रेरणा खोज्ने र सल्लाह खोज्ने उत्तम अवसर हो। मोडेलि acqu्ग परिचितहरू बनाउनुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस् र छलफलमा शामिल हुनुहोस्। याद गर्नुहोस्, जसले प्रश्नहरू गर्दैन उसले ज्ञान प्राप्त गर्दैन। हामी समूहमा वर्ल्ड मोडलि Cup कप च्याम्पियनशिप पुरस्कारका साथ चक्रीय प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्दछौं।
म सामेल हुन चाहन्छु
यहाँ उनीहरूले हाम्रो बारेमा के भन्छन्:
म निश्चित रूपमा सिफारिस गर्दछु। राम्रो काम को एक टुक्रा, विशेषज्ञ सल्लाह, निर्माण योजना र मोडेल प्रगति को हरेक स्तर मा सुन्दर ग्यालरीहरु।
PL मा सबै भन्दा राम्रो! वेबसाइट, पसल, धेरै राम्रो प्रस्ताव। म समुहमा सम्मिलित हुन सिफारिस गर्दछु, उच्च संस्कृति।
धेरै चाखलाग्दो विचारहरूको साथ एक महान र धेरै रोचक समूह
लेखकको बारेमा केहि शब्दहरू
मोडेल बनाउने व्यवसाय हो जुन मेरो बाल्यावस्थाबाट मलाई खान्छ। म निरन्तर मेरो उत्कटता विकास गर्दछ, जसले मोडलरस्की वर्ल्डलाई जन्म दियो: यस्तो ठाउँ जहाँ म मेरो सोखलाई मेरो व्यावसायिक जीवनसँग जोड्दछु। जहाँ गुणस्तर प्राथमिकता हो र बहाना प्रश्न बाहिर छन्।
मोडलार्स्की -वाइत कम्पनीको मालिक
कम्पनी को बारे मा अधिक
2022 २०२१ मोडलि World वर्ल्ड। WordPress र। को प्रयोगमा निर्मित थीम मेस्मराइज